“Waxaan ku faraxsanahay Liverpool” – Mohamed Salah oo u dayriyay Real Madrid – Gool FM
“Waxaan ku faraxsanahay Liverpool” – Mohamed Salah oo u dayriyay Real Madrid
Liibaan Fantastic May 11, 2018
(Liverpool) 11 Maajo 2018 Weerar yahanka Liverpool ee Mohamed Salah ayaa u dayriyay kooxda Real Madrid oo bartilmaameed ka dhiganaysa suuqa xaggaagan.
Salah oo xalay ka soo muuqday xaflada abaalmarinada sanad laha ah ee kooxda Liverpool ayaa sheegay inuu xooga saarayo labada kulan ee u harsan kooxdiisa xiliciyaareed kaan.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay halkaan, waan faraxsanahay wax walbana waa sidii la rabay, laga bilaabo haatan labo kulan ayaa noo haray oo kan ugu soo horeeya uu yahay axada, waa kulan aad muhiim noogu ah, kadibna waxaa noogu xiga Final-ka Champions league, aniguna halkaan ayaan ku faraxsanahay” ayuu yiri Salah.
“Dabcan, rajo badan ayaa ka leeyahay mustaqbalkayga Liverpool, sida aad arkayso waxaan ku naaloonaynaa xiliciyaareed cajiib ah, dhamaanteena waan xamaasadaysanahay, tani waa bilow oo kaliya”.
Mohamed Salah oo ka hadlay gool dhalin la’aanta soo wajahday ayaa yiri:
“Wax gool ah ma dhalin labadii kulan ee u danbeeyay horyaalka ingiriiska laakiin xaalku waa beelo (waa uu qoslay) haddii aanan gool dhalin labo kulan taasi micnaheedu ma ahan in adduunyo gadoon uu dhacay”.
David de Gea oo markii ugu horreysay ebid ku guuleystay abaal marinta....